Nokia: MWC 2018 တွင်တင်ဆက်သောစမတ်ဖုန်းများ Androidsis
2017 သည် Nokia အတွက်အလွန်အောင်မြင်သောနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများ၏ထိပ်သို့ကြီးမားသောပြန်လည်ပတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဒီ ၂၀၁၈ ကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခိုက်အတန့်အဖြစ်ပြသထားတယ်။ Nokia သည် MWC 2018 တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာစီလိုနာတွင်ဤဖြစ်ရပ်တွင်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသစ်အဆန်းများဖြင့်စွန့်ပစ်လိုက်သည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်မည့်ထုတ်ကုန်အသစ်အချို့ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားကုမ္ပဏီမှတင်ပြသည့်အကြောင်းအရာများကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါကဆက်ဖတ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ ဒီသတင်းများအားလုံးကိုသင်တို့အားပြောပြပါမယ်။
ဒီတင်ဆက်မှုမှာဒီအမှတ်တံဆိပ်ကပစ္စည်းအသစ်ငါးခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကဲ့သို့စျေးကွက်ကိုပြန်လည်အနိုင်ယူရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်ဖုန်း ၅ လုံး။ ဤ Nokia ဖုန်း ၅ ခုစီ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်တစ်ယောက်ချင်းစီကိုတစ်ယောက်ချင်းစီအကြောင်းပိုပြောပြပေးပါ ဦး မယ်။
1 Nokia က 8810
2 Nokia က 6
3 Nokia က 1
4 Nokia က7Plus အား
5 Nokia က 8 Sirocco
Nokia က 8810
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကုမ္ပဏီသည်ဒဏ္legာရီ ၃၃၁၀ ၏ထုတ်ဝေမှုအသစ်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ အမှတ်တံဆိပ်၏အကျော်ကြားဆုံးသောဖုန်းများထဲမှတစ်ခု၏ဗားရှင်းအသစ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၈၈၁၀ ၏မူကွဲအသစ်နှင့်ထပ်တူထပ်တူထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရန်ကြိုးစားကြသည်။ ဤဂန္ထဝင်ဖုန်းများ၏နောက်ဆုံးထုတ်ကုမ္ပဏီသည်စျေးကွက်သို့ပြန်လည်စတင်မည်။ The device သည်၎င်း၏အဝါရောင်အရောင်နှင့်အနည်းငယ်ကွေးဒီဇိုင်းနှင့်အတူအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်.
နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ Nokia 8810
operating system Smart Feature OS ပါ
ဖန်သားပြင် 2.4 လက်မ QVGA
Processor ကို Qualcomm 205 မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်း (MSM8905 Dual Core 1.1 GHz)
ဆက်သွယ်မှု 2G / 3G / 4G WiFi USB 2.0 ဘလူးတုသ် ၄.၁
အခြားအင်္ဂါရပ်များ 3.5 မီလီမီတာအသံ jack ကို FM ရေဒီယို
ဒုတိယနေရာတွင် Nokia6၏မူကွဲအသစ်ကိုတွေ့ရသည် အရာကိုလည်း MWC 2018. တစ် ဦး ကအလယ်အလတ်အကွာအဝေးဖုန်းမှာဖြစ်ရပ်မှာ featured ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ကြာရှည်ခံစေရန်ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအချိန်တိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်စေသည်။ ဒါ့အပြင်ဒီအရာအားလုံးဟာလုံးဝမကောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပါ။ ဒါကြောင့်စျေးကွက်ထဲကအမှတ်တံဆိပ်ကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ယခု Nokia6၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အပြည့်အစုံ:
နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ Nokia 6
ဖန်သားပြင် Gorilla Glass ကာကွယ်မှုဖြင့် ၅.၅ လက်မ IPS LCD Full HD
Processor ကို Snapdragon 630
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 32GB / 64GB (နှစ်မျိုးစလုံးကို 128GB အထိချဲ့နိုင်သည်)
နောက်ကင်မရာf/ 16 ကို aperture နှင့်အတူ 2.0 အမတ်
ဆက်သွယ်မှု GSM WCDA LTE WiFi Bluetooth 5.0 USB အမျိုးအစား C
အခြားအင်္ဂါရပ်များ လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ NFC နှင့်နီးကပ်သောအာရုံခံကိရိယာ
ရှုထောင့် 148.8 75.8 8.15 မီလီမီတာ
စြေး 279 ယူရို
တတိယနေရာတွင် Nokia ၁ ကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းသည်မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များကအချို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိထားသောဖုန်းဖြစ်သည်။ အစမှ စ၍ ဤဖုန်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ကတ်တလောက်တွင်ဈေးအသက်သာဆုံးအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အပြည့်အစုံကိုသိရှိနိုင်ပြီး၎င်းသည်ပထမဆုံးဖုန်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည် အန်းဒရွိုက် Go ကို စျေးကွက်ပေါ်မှာ။ တစ်ခြားဘာများ ဒီကိရိယာကငါတို့အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးပြီလား။
နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ Nokia 1
ဖန်သားပြင် ၄.၅ လက်မ IPS
Processor ကို MediaTek MT6737 M Quad-Core 1.1 GHz
နောက်ကင်မရာ LED Flash ကိုနှင့်အတူ5MP
ဆက်သွယ်မှု GSM WCDMA LTE 1/3/5/7/8/20/38/40 Bluetooth 4.2 WiFi
အခြားအင်္ဂါရပ်များ audio jack 3.5 မီလီမီတာနီးကပ်သည့်အာရုံခံကိရိယာ FM ရေဒီယို
ဘက်ထရီ 2.150 mAh ဘက်ထရီ
ရှုထောင့် 133.6 67.7 9.5 မီလီမီတာ
စြေး 89 ဒေါ်လာ
စတုတ္ထအချက်အနေနှင့်အချို့သောအချက်အလက်များကိုသိရှိထားသောအခြားဖုန်းတစ်လုံး။ အမှန်တရားကတော့မကြာသေးမီအချိန်အထိလူအနည်းငယ်လောက်သာသိကြတဲ့သူတွေပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဤ Nokia7Plus အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိထားပြီးဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်းကိုထင်ရှားပေါ်လွင်စေသောဒီဇိုင်းအသစ်တစ်ခုသို့ကျူးလွန်သောဖုန်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှာသောအရာကိုသည် ဒီ 2018 အဘို့အကုမ္ပဏီ၏အသစ်သောအထင်ကရတစ် ဦး မတိုင်မီ။ ဤရွေ့ကား Nokia7Plus အား၏သတ်မှတ်ချက်များ:
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Nokia7Plus
ပုံစံ7Plus အား
ဖန်သားပြင် Gorilla Glass protection ဖြင့် ၆ လက်မ IPS LCD Full HD + ဖြစ်သည်
Processor ကို Snapdragon 660
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 64GB (တိုးချဲ့နိုင်သောပမာဏ ၂၅၆GB)
နောက်ကင်မရာ Two-tone flash နှင့်အတူ aperturef/ 12 နှင့်အတူ 1.75 MP
ရှေ့ကင်မရာf/ 13 ကို aperture နှင့်အတူ 2.6 အမတ်
ဆက်သွယ်မှု GSM WCDMA LTE WiFi 802.11a/b/ g / n / ac Bluetooth 5.0 USB Type C
အခြားအင်္ဂါရပ်များ NFC လက်ဗွေဆင်ဆာ 3.5 mm audio jack
ဘက်ထရီ 3.800 mAh (အစာရှောင်ခြင်းဖြင့်)
ရှုထောင့် 158.38 75.64 7.99 မီလီမီတာ
နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီစက်ကိုရှာသည်။ အမှတ်တံဆိပ်၏သမိုင်းအားဖြင့်မှုတ်သွင်းသောတစ် ဦး ကဖုန်း။ စျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်မည်သို့ဆက်လက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည်ကိုသိသော်လည်း၎င်းသည်ကြော့ရှင်း။ အစဉ်မပြတ်ဒီဇိုင်းကိုဖော်ပြသည်။ ဤ Nokia 8 Sirocco သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အမှတ်တံဆိပ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်က၎င်းကိုသူတို့ဖန်တီးခဲ့သမျှတွင်အလှဆုံးဟုသတ်မှတ်သည်။ ဤရွေ့ကား၎င်း၏အပြည့်အဝသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Nokia 8 Sirocco
ပုံစံ ၈ Sirocco
ဖန်သားပြင် Gorilla Glass 5.5 ကာကွယ်မှုဖြင့်5QHD
Processor ကို Qualcomm Snapdragon 835
နောက်ကင်မရာ နှစ်ထပ် 12 + 13 MP နှင့် aperturesf/ 1.75 နှင့်f/ 2.6 နှင့် optical zoom တို့ပါ ၀ င်သည်
ဆက်သွယ်မှု ဂျီအက်စ်အမ် CDMA WCDMA FDD-LTE WDD-LTE ဘလူးတုသ် ၅.၀ ၈၀၂.၁၁a/b/ g / n / ac
အခြားအင်္ဂါရပ်များ NFC လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ
ဘက်ထရီ 3.260 mAh (ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်းနှင့်အတူ)
ရှုထောင့် 140.93 72.97 7.5 မီလီမီတာ
ဤကိစ္စတွင်ဖုန်းတစ်လုံးစီ၏စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုနှစ်ခုစလုံးသည်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်တစ် ဦး ချင်းစီကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ သင့်ကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားစေမည့်ဖုန်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်။
Nokia 8810 ကို ၇၉ ယူရိုဖြင့်ရောင်းချမည်။ မေလကနေစထွက်မယ်။
Nokia6မှာဆိုရင် ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းထုတ်ကုန်ကိုစျေးကွက်အတွင်းသို့ရောက်သွားနိုင်သည်။ ကြေးဝါဖြင့်အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်သတ္တုအဖြူနှင့်အပြာ - ရွှေတစ်ခုရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်၎င်း၏ RAM နှင့်သိုလှောင်မှုပေါ် မူတည်၍ ဖုန်းနှစ်မျိုးရှိနိုင်သည်။ 3GB RAM နှင့် 32GB သိုလှောင်မှုဗားရှင်းကိုinပြီလတွင်ရောက်ရှိမည်, အခြားရက်စွဲမရှိသေးပေပေမယ့်အခြားနောက်ပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်နေစဉ်။ ပထမဆုံးဗားရှင်းသည်စျေးကွက်အတွင်းသို့ကျရောက်နိုင်သည် 279 ယူရို၏စျေးနှုန်း။
Nokia 1 သည်သုံးစွဲသူများယခုဝယ်ယူနိုင်သောဖုန်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရနိုင်သည်။ စျေးကွက်ထဲကိုအရောင်နှစ်မျိုး၊ နွေးထွေးသောအနီရောင်နှင့်အပြာရင့်ရောင်တို့ဖြင့်ရောင်းချသည်။ ထို့အပြင်အချို့စျေးကွက်များ၌၎င်းသည်အရောင်ဖျော့ဖျော့အရောင်များနှင့်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ ဖုန်း၏စျေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၈၉ ဖြစ်သည်.
စတုတ္ထနေရာတွင် Nokia7Plus ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏အထင်ကရသစ်တစ်ခု။ ဒီပစ္စည်းကိုဈေးကွက်ထဲမှာအရောင်နှစ်မျိုး (အနက်ရောင်နှင့်အဖြူ) နှစ်မျိုးလုံးကိုကြေးနီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်storesပြီလတစ်လလုံးတွင်စတိုးဆိုင်များသို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီးယူရို ၃၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်.
အမှတ်တံဆိပ်မှတင်ပြခဲ့သောနောက်ဆုံးထုတ်ကိရိယာများမှာ Nokia 8 Sirocco ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းရှိသောကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီပစ္စည်းဟာဈေးကွက်ထဲကိုရောက်သွားမှာပါ ofပြီလအစ။ ဒါလုပ်ပေးလိမ့်မယ် 749 ယူရို၏စျေးနှုန်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » MWC 2018 တွင်တင်ပြခဲ့သော Nokia စမတ်ဖုန်းငါးလုံးကိုရှာဖွေပါ